Dhega badan oo sheegay in dad badani ay biyo la’aan dartii ugu geeriyoodeen deegaanka KM.50 | goboladaradio.com	Sunday, May 26th, 2013	Home
Dhega badan oo sheegay in dad badani ay biyo la’aan dartii ugu geeriyoodeen deegaanka KM.50
Published on August 6, 2012 by admin · No Comments Published on August 6, 2012 by Lucky (Gobolada Radio) Abaan duulaha Ciidamada Xooga Dalka Soomaaliyeed C/kariin Yuusuf Aadan (Dhega Badan) ayaa xili uu saxaafada lahadlayey waxa uu sheegay in ay Gaajo iyo biyo la’aan dartii ay dad farabadan ugu dhamaanayaan deegaanadii ay dhawaan qabsadeen.
Gen. Dhega Badan oo qaar ka mid ah warbaahinta qadka taleefonka kula hadlay ayaa sheegay in ku dhowaad 200-oo ruux ay oon iyo gaajo ugu geeriyoodeen deegaano hoosyimaada deegaanka KM-50 kadib markii sida uu sheegay ay Xarakada Al-shabaab sadax ceel oo ku taal KM 50 kala bexeen matooradii biyaha ka soo saarayay.
Abaan duulaha Ciidamada Xooga Dalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay Hay’addaha Samafalka iyo Dowladaba inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay dad kaasi ugu fidiyaan kaalmo biyo iyo raashiin isugu jirta.
Deegaanka Number 50 ee gobolka sh/hoose iyo deegaanada ku hareereysan ayaa waxa ku nool qoysas xoola dhaqato u badan.
(Oct 26, 2012 Goboladaradio) Fagaaraha Weyn ee ku yaala Afaafka hore ee Xarunta Madaxtooyada Maamul goboleedka Ximan iyo Xeeb ...	Realtime blog statistics